ဘီဝခိုစိုစုအိ ဆာကူရာ ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
ဘီဝရေကန်ရဲ့ ကန်ရေတွေကို ကျိုတိုကို စီးဆင်းစေဖို့ အတွက် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ရေမြောင်းကမ်းနှစ်ဘက်မှာ အပင် ၅၀၀ လောက် ရှိတဲ့ ဆာကူရာပန်းပင်တန်းတွေက စီတန်းနေပါတယ်။ ညရောက်တဲ့အခါ မီးထွန်းထားပြီး ညကောင်းကင်မှာ ပေါ်နေတဲ့ ဆာကူရာပန်းတွေက အံ့သြစရာကောင်းလောက်တဲ့ မြင်ကွင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
Shigaken'ōtsushi miiderachō oyobi Daimondōri
ကန်ရေဖြင့် ရှင်သန်နေတဲ့ ပန်းရောင် ဆာကူရာပန်းတွေက နေ့ ရော ညပါ မတူညီတဲ့ ခံစားမှု ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက် နှစ်ခုလုံး ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Keihan'ishiyama Sakamotoလိုင်း ( Miideraဘူတာ ) ဆင်းပြီး ချက်ချင်းရောက်သည်။
တရားဝင်အမည်မှာ (နာဂရာစန်အွန်းဂျော်ဂျိ) ဖြစ်ပြီး၊...
လူပေါင်း ၃ သိန်း ၁ သောင်းလောက် လာရောက်လည်ပတ်ကြပြ...
ဂျပန်မှာ အကြီးဆုံး မျက်နှာပြင်ဧရိယာနဲ့ ရေပမာဏကို...
၇၀၃ ခုနှစ်မှာ ထည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးဂိုဏ်းရဲ့ မွ...
နှစ်စဉ် သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်မှ ကျင်းပတဲ့ ကျိုတိုရဲ့ ရိ...
ရှေးခေတ်ကတည်းက (မိုမိဂျိအဲအိခန်းဒိုး) ဟု ရင်းနှီ...
( တစ်ပင်လုံးအပြည့်ပွင့်ချိန်နီးပြီ ! ) ကြည့်လို့ ကောင်း ၊ လမ်းလျှောက်ကောင်းတဲ့ ဆာကူရာဥမင် လက်ရွေးစင် ၇ ခု
မတ်လ ၂၁ ရက် ( ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ) မနက် ၊ တိုကျိုမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အစောဆုံး ဆာကူရာပွင့်မယ့်သတင်းထွက်လာပြီး ဘာလိုလိုနဲ့ပန်းကြည့်ချိန်ကို မျှော်လင့်ပြီး ရေတွက်လာခဲ့မိတယ် ! ဒီတခါ ပန်းရောင် ဆာကူရာပွင့်...